ကားဖြင့်တိုက်ကာ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည့် သတင်းထောက် မမှူးရတနာခက်မို့မို့ထွန်းကို အမှတ် ၂ စစ်ဆေးရုံမှ စစ်ကြောရေးသို့ခေါ်ဆောင် - Myanmar Pressphoto Agency
MPA January 12, 20222min read
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ပန်းပင်ကြီးလမ်း၌ ဆန္ဒပြပွဲအား သတင်းရယူနေစဉ် ကားဖြင့်တိုက်၍ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး ဦးခေါင်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူ MPA သတင်းဌာနမှ သတင်းထောက် မမှူးရတနာခက်မို့မို့ထွန်းကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ရွှေပြည်သာစစ်ကြောရေးသို့ ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း ​သိရသည်။
မမှူးရတနာခက်မို့မို့ထွန်းသည် ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ဒဏ်ရာများအနည်းငယ်သက်သာပြီး အမှတ်(၂) စစ်ဆေးရုံမှ ဆရာဝန်များက ဆေးရုံဆင်းခွင့်ပြုပြီးနောက်နေ့တွင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက စစ်ဆေးရုံ မှ ရွှေပြည်သာစစ်ကြောရေးကိုတိုက်ရိုက်ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းသိရသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်တွင် ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ပန်းပင်ကြီးလမ်း၌ ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေသူများကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့က အနောက်မှကားဖြင့်တိုက်၍ဖြိုခွင်းခဲ့ရာတွင် ဆန္ဒပြပွဲသတင်းရယူနေသူ MPA သတင်းဌာနမှ သတင်းထောက် မမှူးရတနာခက်မို့မို့ထွန်းနှင့် ကိုကောင်းဆက်လင်းတို့အပါအဝင် လူငယ် ၁၁ ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကာ မမှူးရတနာခက်မို့မို့ထွန်းမှာ ဦးခေါင်းဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရရှိခဲ့သလို မျက်နှာတစ်ခြမ်းနှင့် ပေါင်းရင်းမှစကာ ခြေထောက်တစ်ချောင်းလုံးနီးပါးကျိုးကြေသွားခဲ့သည်။​
ထို့အတူ မမှူးရတနာခက်မို့မို့ထွန်းနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည့် ကိုကောင်းဆက်လင်းမှာ ဒဏ်ရာများဖြင့်အဖမ်းခံခဲ့ရပြီး လေးရက်အကြာတွင် စစ်ကြောရေးသို့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံရပြီးနောက် ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်နေ့တွင် အင်းစိန်အကျဥ်းထောင်သို့ ရောက်ရှိပြီဖြစ်သည်။
ကိုကောင်းဆက်လင်းမှာ ကားဖြင့်တိုက်ခံရသည့်အတွက်ကြောင့် ခါးအောက်ပိုင်းဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရရှိပြီး ဒါဏ်ရာများမသက်သာသေးသည့်ကြားမှ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များ၏ စစ်ကြောရေးသို့ ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံခဲ့ရသည်။​
ပြည်သူများသတင်းသိပိုင်ခွင့်အတွက် မြေပြင်တွင် သတင်းလိုက်နေသည့် MPA သတင်းထောက်များအား ကိုဖမ်းဆီးထားခြင်းကို အမြန်ဆုံးပြန်လည်လွှတ်ပေးရန်နှင့် ကောင်းမွန်သည့် ဆေးကုသခွင့်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း MPA မှ ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
#MPA #Myanmar #Media #ပန်းပင်ကြီးလမ်း
Reporter Ma Hmuu Yadanar Khet Moh Moh Tun who was Arrested by being Crashed with Car Taken from No.2Military Hospital to Interrogation
MPA news agency reporter Ma Hmuu Yadanar Khet Moh Moh Tun who was injured in the head after being crashed by car while obtaining news on Pan Pin Kyi raod in Kyimyindaing township has been taken to Shwe Pyi Thar interrogation by security forces on the morning of January 11.
Ma Hmuu Yadanar Khet Moh Moh Tun was directly taken to Shwe Pyi Thar interrogation after her injuries got slightly better on January 10 andaday after doctors at no.2military hospital allowed her to leave the hospital.
On December5of 2021, while obtaining news of protesters on Pan Pin Gyi road in Kyimyindaing township being crashed withacar by the security forces, 11 young people were arrested including reporters Ma Hmuu Yadanar Khet Moh Moh Tun and Ko Kaung Sett Lin from MPA news agency. Ma Hmuu Yadanar Khet Moh Moh Tun was severely wounded in the head, and one side of her face and nearly the entire leg from top of the thigh was broken.
Likewise, Ko Kaung Sett Lin who was arrested along with Ma Hmuu Yadanar Khet Moh Moh Tun was also arrested with injuries and was taken to interrogation four days later and has already arrived to Insein Prison on January 10.
As Ko Kaung Sett Lin was hit by car, he has severe injuries below the waist and he was taken to interrogation by security forces despite his wounds not being healed yet.
MPA states that the MPA reporters who were procuring news on the ground for the people’s right to know the news be freed as soon as possible and be allowed to receive good medical treatment.
#MPA #Myanmar #Media #PanPinGyiRoad
Tags: FreePress HmuuYadanarKhetMohMohTun KaungSatLin Media MPA Myanmar News PanPinGyi Yangon
Previous: Myanmar Pressphoto Agency ၏ သတင်းထောက်နှစ်ဦး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ဖမ်းဆီးခံရ